Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8) waa stabto anabolic oo loo isticmaalo kordhinta murqaha iyo xoogga iyo kor u qaadista miisaanka. waxay aad ugu egtahay wanaajinta nandrolone.
Daawada Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) (62-90-8) video
Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8)
Nandrolone phenylpropionate (NPP) budada waa anterik-androgenic steroid (AAS) iyo 1 (2) -hidhidrogened analogue of testosterone. Nandrolone phenpropionate sidoo kale waa a 3-phenylpropionate ester. Waxay leedahay kaalin sida anabolic anabolic iyo arogen. Waxay ka timaaddaa nandrolone phenylpropionate. Waxa kaliya oo laga helaa shakhsiyaadka isticmaalay ama qaatay daroogada. Waa steroid C18 leh asrojenik iyo aabisyo. Waxaa guud ahaan laga diyaariyaa anshaxyada alkahoolka ah ee estradiol si ay u egtahay testosterone, laakiin ka yar hal ugub ah booska 19. Waa jadwalka daroogada III ee US Nandrolone waa agonist xasaasiyadeed oo asrogen ah. Daroogadu waxay ku xidhan tahay dhismayaasha cirbadaha kuwaas oo u oggolaanaya in ay soo gasho nukleus oo si toos ah ugu xiraan taxane nucleotide gaar ah ee DNA chromosomal. Meelaha lagu xiro waxa loo yaqaan 'elements hormone response' (HREs), iyo saamaynta dhaqdhaqaaqa transcriptional ee jaangooyooyinka qaarkood, oo soo saaraya saameynta asaasiga ah.
Xashiishka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8) Smamnuucista
Product Name Roog Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada
Magaca Kiimikada • NPP
• Calaamadaha Nandrolone
• Nanjrolone hydrocinnamate
Molecular Wsideed 406.56
barafku Psaliid 85-87 ° C
dhibic kulayl 487.61 ° C (qiyaasta adag)
Color Caddaan cad ama midab cad
Storage Temperature Walxaha la kontoroolo, -20? C ee qaboojiyaha
Application Daawada Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ayaa badanaa loo isticmaalay daaweynta kansarka naasaha ee dumarka iyo daaweynta dabiiciga ah ee loogu talagalay daaweynta dumarka ama postmenopausal osteoporosis ee haweenka.
Waa maxay budada Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) (62-90-8)?
Nandrolone Phenylpropionate waa 19-nortestosterone (19-nor) steroids anabolic. 19-mana kala soociddu waxay loola jeedaa isbeddel qaabdhismeed ee hormoonka testosterone ee in atom kaarboon laga saaray meesha 19th. Isbedelkan qaabdhismeedka ah ee noocan ah wuxuu na siinayaa Nandrolone, iyo adoo ku daray qiyaasta dhererka Phenylpropionate waxaan leenahay Nandrolone Phenylpropionate.
Iyada oo ku saleysan shaqeynta steroid, Nandrolone Phenylpropionate waxay la mid tahay Nandrolone Decanoate. Labada noocba waxay ka kooban yihiin hoormoon firfircoon. Marka la eego NPP nuqul gaaban oo loo yaqaan 'Nandrolone' ka dib markii la muday, lakiin sidoo kale wuxuu qaataa wax yar oo nus ah. Taas macnaheedu waa Nandrolone Phenylpropionate ayaa badanaa lagu duray inta badan xajmiga suntan ee weyn haddii heerarka dhiiggu uu yahay mid deggan.
Shirkadda Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8)
Calaamadaha Nandrolone waxaa kaliya laga helaa shakhsiyaadka isticmaalay ama qaatay daroogada. Waa steroid C18 ah oo leh aalado iyo anabolic. Waxaa guud ahaan laga diyaariyaa anshaxyada alkahoolka ah ee estradiol si ay u ekaato testosterone, laakiin ka yar hal kaar oo ah booska 19. Waa jadwalka daroogada III ee US Nandrolone waa agonist xasaasiyadeed oo asrogen ah. Daroogadu waxay ku xiran tahay dhismayaasha cirbadaha kuwaas oo u oggolaanaya in ay soo galaan nukleus oo si toos ah ugu xiraan taxane nucleotide gaar ah ee DNA chromosomal. Meelaha lagu xiro waxa loo yaqaan 'elements hormones response' (HRE), iyo saamaynta dhaqdhaqaaqa transcriptional ee jaangooyooyinka qaarkood, oo soo saara saameynta asaasiga ah.
Dufanka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8)
Xaaladda caafimaad ee caadiga ah ee Nandrolone Phenylpropionate ayaa caadi ahaan ku dhici doona 50-100mg wiiggii. Isticmaalka haweenka, inkasta oo aan sida caadiga ah loo qorin haddii la qoro waxay caadi ahaan noqon doontaa 50mg wiig kasta. Dhammaan goobaha caafimaad ee ku dhow dhammaan qaybta daaweynta ee Decanoate.
Si aad u heshid cayaaraha ama jimicsiga jidh-dhisaha aad ayuu u kala duwanaan karaa. 100mg toddobaadkii ayaa siin doona faa'iido daaweyn muhiim ah oo leh 200mg usbuuc kasta oo ah mid aad u badan sababtoo ah taasi waxay hubineysaa in si weyn loo hagaajin doono soo kabashada. Inta badan goobaha waxqabadka 300-400mg toddobaadkii ayaa noqon doona qiyaasta daaweynta caadiga ah, tani waa nooc kaamil ah oo loogu talagalay dhisidda ama ilaalinta unugyada murqaha. Qaar waxay u isticmaali doonaan wax badan, laakiin tani waxay kordhin doontaa khatarta waxyeelada.
Iyadoo aan loo eegin qiyaasta qiyaasta isticmaalka qiyaasta wadarta caadiga ah waxay u kala qaybsameysaa saddex cirbadood oo isku mid ah toddobaadkii. Ku shaqeeya maalin kasta saldhig u ah natiijooyinka ugu wanaagsan. 8-12, muddada caadiga ah ee isticmaalka badmaaxiinta. Dhamaan cayaaraha gabdhaha ah ee isticmaala steroid todobaadyo 4-6 iyo qiyaasta caadiga ah ee aan ka badnayn 50mg toddobaadkii haddii fayrasku ka fogaado.
Xashiishka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8) Faa'iidooyinka
Kordhinta Nitrogarinta Hore
Kordhinta Protein Protein
Tirada Unugyada Dhiigga ee Dheecaanka ah
Kordhinta Collagen Synthesis & Waxyaabaha Macdanta Lafaha
NPP waxaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo daweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan. Bukaan-socodka qaba HIV iyo kansarka ayaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan ​​inay isku durto, sida bukaanka qaba daal iyo jirro muruqa. Sidoo kale, kuwa dhiigooda ku jira ayaa laga yaabaa inay faa'iido. Tusaalooyinka kale ee xaaladaha laga yaabo in lagu daaweeyo budada Nandrolone Phenylpropioniate waxaa ka mid ah kansarka naasaha, dhiig yari, dhiig yari, gubasho halis ah, boogaha, dhibaatooyinka maskaxda (carruurta) iyo osteoporosis.
Soo iibso Root Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8) laga bilaabo Buyaas.com
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Cycle, Natiijooyinka, Faa'iidooyinka, Qiyaasta
Brennan, R., Wells, JS, & Van Hout, MC (2017). Isticmaalka sawirada isticmaalka sawirada iyo daroogada waxtarka leh ee kor u kaca (iEP) ee dadweynaha guud: dib u eegis nidaamsan. Caafimaadka & daryeelka bulshada ee bulshada, 25(5), 1459-1531.
Roussel Geste, J., & Maldonado-Vlaar, CSC (2016). Saameynooyinka steroids ee subkroniki ah oo ku saabsan daaweynta kookeynta iyo dabeecadaha walwalka leh ee jinsiga ragga ee qaangaarka ah(Daraasada dhakhaatiirta).
Piacentino, D., D Kotzalidis, G., Del Casale, A., Rosaria Aromatario, M., Pomara, C., Girardi, P., iyo Sani, G. (2015). Isticmaalka steroid anabolic-androgenic iyo psychopathology ee cayaaraha. Dib u eegis nidaamsan. Xanuunkan neuropharmacology, 13(1), 101-121.
Brennan, R. (2017). Daraasada Ethnopharmacological ee Isticmaalka Isticmaalka Nidaaminta iyo Sawirada Kobcinta Daroogooyinka (PIED) Qaybaha I & II(Daraasada dhakhaatiirta).
Jardi, F., Laurent, MR, Dubois, V., Kim, N., Khalil, R., Decallonne, B., ... & Claessens, F. (2018). Androgen iyo tallaalka estrogen ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa jirka ee ragga: sheeko ka baxsan murqaha. Wargeyska Endocrinology, JOE-18.
dib u eegis 1 waayo, Xashiishka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8)
Sheyga NANDROLONE PHENYLPROPIONATE (NPP) waa mid aad u faa'iido leh.